Qiimaha Dadka Soomaalida ku aadi karaan Xajka Sanadkan oo la shaaciyey iyo koror ku yimid - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Qiimaha Dadka Soomaalida ku aadi karaan Xajka Sanadkan oo la shaaciyey iyo koror ku yimid - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddiga tartanka Adeegga Xajka wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta xukuumadda Xilgaarsiinta ayaa shaaciyay qiimaha sanadkan 1443/2022 lagu aadi karo Xajka.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in lacagta laga rabo qofka Xaajiga ah ay gaareyso $5,230 oo isugu jira kharashka Gudaha Sacuudiga ee xajka, Tikidhka iyo adeegyada kale.
Qiimaha Xajka lagu aado ayaa sanad kasta wasaaradda Diinta u sameysaa sicir, iyadoo sanadkan loo kala qaaday qiime xajka Sacuudiga gudihiisa ah, tikid iyo adeegyada kale, halka sanadihii hore ay lacagta ahayd isku duub qiimihiisu ahaa $3800.
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha diinta ayey tahay markii ugu horeysay ee uu xaj maamulo, iyadoo xajku ka mid yahay arrimaha lagu xisaabtamo ee lacagaha badan laga helo.
Previous articleWararkii ugu danbeeyay ee magaalada Muqdisho iyo Ciidamo xiray Wadooyinka…
Next articleXasan Sheekh oo tegay Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Jid xiristii ugu xumeyd muddooyinkan..